नेपाल केरामा आत्मनिर्भर बन्न अझै सकेन: भारतबाट दैनिक ४० टन केरा भित्रिदै !! – Famous Nepal
02:20: AM Sunday December 17, 2017
नेपाल केरामा आत्मनिर्भर बन्न अझै सकेन: भारतबाट दैनिक ४० टन केरा भित्रिदै !!
Posted on November 15, 2017 at 12:53 pm by फ्यामोस नेपाल
असोज २८,बाँके : नेपालगञ्ज नाका भएर दैनिक सरदर ४० टन केरा नेपाल भित्रिने गरेको छ। चाडवाडका बेला दैनिक ४० गाडीसम्म केरा आउने गरेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ।
नेपालमा केरा खेती नगण्य मात्रामा उत्पादन हुने भएकोले नेपाली बजारमा भारतीय केराको विकल्प नभएको हो। चाडपर्वमा बाहेक नेपालगन्ज नाका भएर दैनिक ८/९ वटा पिकअप भ्यानमा केरा आउने गरेको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका अधिकृत एवं सूचना अधिकारी सुभाषकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। पिकअप भ्यानबाहेक दैनिक २५/३० ठेला केरा नेपालगन्ज भित्रिने गरेको उनले बताए। ठेलामा आउने केरा नेपालगन्जका लागि मात्र हो। ‘भारतीय केरा नेपाली बजारमा नआउने हो भने यहाँ केराको हाहाकार हुन्छ,’ उनले भने, नेपाली बजारलाई भारतीय केराले धानेको छ।’ पश्चिम नेपालको बाँके, बर्दिया, कैलाली, दाङ र कञ्चनपुरमा दैनिक १ सय ६० टन केरा उत्पादन हुने गरेको केरा व्यवसायीले जनाएका छन्।
बाँकेमा ४० हेक्टरमा केरा खेती भएको भनिएपनि कति क्षेत्रफलमा हुन्छ भन्ने यकिन हुन नसकेको केरा खेती व्यवसायी अधिकारीले बताए। उनले बाँकेमा दैनिक १०/१२ टनमात्र केरा उत्पादन हुने गरेको बताए। बाँकी क्षेत्र केरा भारतीय केराले धानेको छ। ‘बाँकेमा उत्पादन भएको केरा एक दिन पनि नपुग्ने छ, भारतीय केराले नकारात्मक असर पारेकोले कृषकहरु त्यसतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने। भारतीय केराको मूल्य आधा सस्तो नेपालको तुलनामा भारतीय कृषकले उत्पादन गरेको केरा आधा सस्तो छ। भारतीय सरकारले केरा खेतीमा अनुदान दिएका कारण नेपालको तुलनामा भारतीय केरा सस्तो हुन गएको केरा खेती व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष देवेन्द्र अधिकारीले बताए। उनले भारतीय केरा सस्तो भएकोले नेपाली ब्यापारीले भारतीय केरा रोज्ने गरेका बताए।
ब्यापारीले अनेकौँ बहाना बनाएर नेपाली कृषकले उत्पादन गरेको केरा उठाउन नमान्दा समस्यामा परेको अधिकारीले बताए। उनले आफूले उत्पादन गरेको ३० गाडी केरा ब्यापारीले एक हप्तापछि मात्र उठाएको बताए। ‘काटेर राखेको केरा ब्यापारीले बल्लतल्ल उठाए, तर मूख्य तोकेका छैनन्,’ उनले भने। उनले लागतअनुसार कृषकले मूख्य तोक्न पाउनु पर्ने बताए। ‘हाम्रो उत्पादनको मूल्य हामीले तोक्नु पर्ने हो, तर यहाँ त ब्यापारीले मन लाग्दो गरि मूल्य निर्धारण गर्छन्,’ उनले गुनासो गरे, ‘हामीले निर्धारण गर्दा नकिनेर भारतीय कृषकका केरा किन्छन्।’ नेपाली कृषकले उत्पादन गरेका केरा कारण लाई भारतीय केराले पूर्ति गर्दै आएको छ। नेपाली केरा प्रतिदर्जन ३० रुपैयाँमा बिक्री गर्दा मात्र कृषकको परल मूल्य उठ्ने नेपाली केरा खेती कृषकले जनाएका छन्। तर, नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय बजार रुपईडिहामा काचो केरा प्रति केजी १५–२० रुपैयाँ पर्ने गरेको छ। खुल्ला सीमाना र सस्तो पर्ने भएकोले बाँकेका ब्यापारी नेपाली कृषक कहाँ नगई भारतीय कृषक कहाँ दौडिने गरेका छन्। जथाभावी भित्रिने भारतीय केरामा कडाइ गर्न माग भारतीय केराले नेपालमा उत्पादित केरा धराशायी भएको भन्दै पश्चिम नेपालका केरा व्यवसायीले भारतबाट आउने केरामा कडाई गर्न माग गरेका छन्।
विश्व मापदण्ड पुरा नगरेर भारतीय केरा पश्चिमका विभिन्न जिल्लामा बिक्री भइरहेकोले स्वदेशी केरा खपत नभएको र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै व्यवसायीले भारतीय केराको बिक्री नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरका केरा व्यवसायीले बाँकेका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी देबेन्द्र लामिछानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भारतबाट खुलेआम आउने केरा नियन्त्रण गरी राजश्वमा बृद्धि गर्न माग गरेका छन्। ‘क्वारेन्टाइन परीक्षण बिनानै भारतबाट भित्रिरहेको केराले पश्चिम क्षेत्रको केरा खेतीलाई धरासायी बनाएको छ,’ व्यवसायीले बुझाएको ज्ञापनपत्रका उल्लेख छ, ‘भन्सार राजश्व थोरै लिएकै कारण भारतीय कृषकले उत्पादन गरेको केराले बजार पाएको हो।’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र बिभिन्न संघसंस्थाहरुको सहयोगमा बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुर केरा ब्लकको रुपमा बिकसित हुँदै गएको भन्दै केरा तथा फलफूल व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष अधिकारीले भारतबाट निर्वाधरुपमा आयातित केराका कारण यहाँका कृषक ऋणमा डुब्न थालेको गुनासो गरेका छन् भारतीय केरामा प्रतिवन्ध लगाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन, मापदण्ड पूरा गरेर आयात गर्नु पर्‍यो भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो,’ उनले भने। ज्ञापन पत्र बुझ्दै बाँकेका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेले विश्व ब्यापार संगठनको मापदण्ड अनुसार भारतबाट केरा आयात गर्ने वातावरण मिलाउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे।
उनले केरा खेतीलाई व्यावसायीक बनाई पलायन भइरहेको यूवा शक्तिलाई रोक्ने वातावरण बनाउन प्रशासन तत्पर रहेको बताए। कडाइका साथ क्‍वारेन्टाइन गर्न सुझाव फाइटोसेनेटरी सर्टिफिकेट र टेक्निकल बेरियर टु ट्रेड अनुसार मापदण्ड पुर्‍याएर मात्र भारतीय केरा आयात गर्नुपर्ने ब्यवसायीको सुझाव दिएका छन्।
उनीहरुले क्षेत्रीय प्लान्ट क्वारेन्टाइन नेपालगन्जले हचुवाको भरमा गुणस्तरियता जाँच गर्दै आएको आरोप लगाएका छन्। ‘प्लान्ट क्वारेन्टाइनले राम्रोसँग जाँच नगर्दा नेपालीको स्वास्थ्यमा असर परेको छ,’ ब्यवसायी देवेन्द्र अधिकारीले भने। भन्सार प्रयोजनका लागि हाल भारतबाट आयात हुने केराको कायम गरेको प्रति घरी २४० र प्रतिदर्जन २० रुपैयाँ समय सापेक्ष नभएकोले संशोधन गर्नुपर्ने, काँचो केरा र चिस्यान केन्द्रमा पकाएर आयात गरेको केराको मूल्य फरक हुनुपर्ने माग व्‍यवसायीले गरेका छन्। भारतबाट आयात हुने केरामा कायम रहेको ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क बढाएर २५ रुपैयाँ बनाउनु पर्ने र मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग कृषकको छ। आफूहरुको माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी कृषकले दिएको समाचार थाहा खबर मा छ !
कार्तिक १३, २०७४-सिन्डिकेट गर्न नपाउँदा पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थ लोड/अनलोड ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । नयाँ टयांकर थप्न…